Kedu mgbe achọrọ onye ọka iwu? - Law & More B.V.
blog » Kedu mgbe achọrọ onye ọka iwu?
Kedu mgbe achọrọ onye ọka iwu?
Ị natala akwụkwọ ịkpọ oku na ị ga -abịa n'ihu onye ọka ikpe ga -ekpe ikpe gị ma ọ bụ nwee ike ịmalite usoro n'onwe gị. Kedu mgbe ịkpọ onye ọka iwu ka ọ nyere gị aka n'arụmụka gbasara iwu gị bụ nhọrọ yana mgbe iwepụta onye ọka iwu dị mkpa? Azịza nke ajụjụ a dabere n'ụdị esemokwu ị na -eme.
A bịa n'ihe gbasara mpụ, itinye aka na onye ọka iwu abụghị iwu. N'ime usoro mpụ, ndị otu na -emegide abụghị nwa amaala ma ọ bụ nzukọ kama ọ bụ ọrụ ikpe ọha. Bodytù a na -ahụ na achọpụtara ma chọpụta ikpe mpụ ma soro ndị uwe ojii na -arụkọ ọrụ. Ọ bụrụ na mmadụ anata akwụkwọ ịkpọ oku site n'aka ndị ọrụ na -ahụ maka ikpe ọha, a na -ewere ya dị ka onye a na -enyo enyo na onye ọka iwu ọha ekpebiela ikpe ya ikpe maka ime mpụ.
Agbanyeghị na ọ bụghị iwu na a ga -etinye onye ọka iwu na ikpe mpụ, a na -atụ aro ka ịme ya. Na mgbakwunye na eziokwu na ndị ọka iwu nwere ọpụrụiche na ha nwere ike ịnọchite anya mmasị gị nke ọma, a na -emehie mgbe ụfọdụ n'oge nyocha site, dịka ọmụmaatụ, ndị uwe ojii. Ịmata ihe ndị a, nke na -adịkarị n'iwu n'ụzọ iwu, njehie na -achọ ihe ọmụma ọkachamara nke onye ọka iwu nwere yana ọ nwere ike bute nnukwu mmetụta na mkpebi ikpe ikpeazụ, dị ka ịtọhapụ mmadụ. Onye ọka iwu nwekwara ike ịnọ mgbe a na -agba gị ajụjụ ọnụ (yana ajụjụ ndị akaebe) wee si otú a hụ na ikike gị.
Ntinye aka nke onye ọka iwu abụghị iwu na ikpe megide ndị otu gọọmentị ma ọ bụ mgbe ị tinyere akwụkwọ mkpesa na Central Appeals Tribunal ma ọ bụ ngalaba ikike nchịkwa nke kansụl steeti. Dịka nwa amaala ma ọ bụ nzukọ ị na -emegide gọọmentị, dị ka IND, ndị na -ahụ maka ụtụ isi, obodo, wdg n'ihe gbasara ego mmachi akpa, uru na ikike obibi gị.
Iwere onye ọka iwu bụ nhọrọ amamihe dị na ya. Onye ọka iwu nwere ike ịtụle ohere ị ga -enwe nke ọma mgbe ị na -ede akwụkwọ mkpesa ma ọ bụ malite usoro wee mara arụmụka a ga -etinye n'ihu. Onye ọka iwu makwaara ihe iwu chọrọ na oke oge nke metụtara n'iwu nchịkwa wee nwee ike ijikwa usoro nhazi nke ọma.
Okwu gbasara obodo gụnyere esemokwu dị n'etiti ndị mmadụ n'otu n'otu na/ma ọ bụ otu iwu nkeonwe. Azịza nye ajụjụ ma enyemaka onye ọka iwu ọ bụ iwu ka ọ dị mgbagwoju anya n'okwu ikpe obodo.
Ọ bụrụ na usoro a na -echere n'ihu ụlọ ikpe mpaghara, inwe onye ọka iwu abụghị ọrụ. Ụlọ ikpe subdistrict nwere ikike na ikpe nwere (atụmatụ) nke erughị € 25,000 na ikpe ọrụ niile, ikpe mgbazinye, obere ikpe mpụ na esemokwu gbasara kredit ndị ahịa na ịzụrụ ndị ahịa. N'ọnọdụ ndị ọzọ niile, usoro a dị n'ụlọ ikpe ma ọ bụ ụlọ ikpe mkpegharị, nke na -eme ka ọ bụrụ iwu na ị ga -enwerịrị onye ọka iwu.
N'okpuru ọnọdụ ụfọdụ, ọ ga -ekwe omume n'okwu ikpe obodo ịrịọ ụlọ ikpe maka mkpebi ngwa ngwa (nwa oge) na usoro ihe mberede. A na -akpọkwa usoro ihe mberede dịka usoro nchịkọta. Dịka ọmụmaatụ, mmadụ nwere ike icheta usoro nchịkọta nke 'Viruswaarheid' gbasara mkpochapụ oge ọ na -alọta.
Ọ bụrụ na ịmalitere usoro nchịkọta onwe gị n'ụlọ ikpe obodo, ọ bụ iwu na ị ga -enwe onye ọka iwu. Nke a abụghị ikpe ma ọ bụrụ na enwere ike ịmalite ikpe na ụlọ ikpe mpaghara ma ọ bụ ọ bụrụ na ị na -agbachitere onwe gị na nchịkọta nchịkọta megide gị.
Ọ bụ ezie na itinye onye ọka iwu adịghị mkpa mgbe niile, ọ na -abụkarị ihe amamihe dị na ya. Ndị ọka iwu na -amakarị ihe niile gbasara ọrụ ahụ yana otu ha ga -esi weta okwu gị nke ọma. Agbanyeghị, itinye onye ọka iwu abaghị uru naanị ma ọ bụrụ na ị ga -aga ma ọ bụ chọọ ịga ụlọ ikpe. Dịka ọmụmaatụ, chee maka ịma ọkwa megide ụlọ ọrụ gọọmentị ma ọ bụ ntaramahụhụ, ọkwa adịghị mma n'ihi arụghị ọrụ ma ọ bụ agbachitere mgbe ị nọ n'ihe ize ndụ nke ịchụpụ gị. N'inye ihe ọmụma na ikike iwu ya, itinye onye ọka iwu na -enye gị ohere ịga nke ọma.
Ị chere na ịchọrọ ndụmọdụ ọkachamara ma ọ bụ enyemaka iwu site n'aka onye ọka iwu pụrụ iche mgbe ị gụsịrị akụkọ ahụ? Biko egbula oge ịkpọtụrụ Law & More. Law & MoreNdị ọka iwu bụ ndị ọkachamara na ngalaba iwu ndị a kpọtụrụ aha n'elu ma nwee obi ụtọ inyere gị aka site na ekwentị ma ọ bụ ozi-e.
Previous Post Kedu ihe ọkaiwu na-eme?